Mafashoni - Dhizaini magazini
Tsvaga zvigadzirwa zvakanaka kubva kune vanogadzira pasi rese.
Ongorora magadzirirwo akanaka
Tsvaga zvigadzirwa zvitsva kubva kune zvigadzirwa zvepasi rese.
Ongorora zvigadzirwa zvitsva
Tsvaga hurongwa hukuru hwekuvaka kubva kuvarongi vepasi rese.
Ongorora hukuru hwekuvaka
Tsvaga mafashoni ekugadzira emafashoni kubva kune vekunze mafashoni vagadziri.
Ongorora maitiro ekugadzira mafashoni
Tsvaga yakakura graphic magadzirirwo kubva yepasi rose gadziriso magadzirirwo.
Ongorora mikuru mifananidzo yemifananidzo
Tsvaga mikuru mikuru yekugadzira kubva kumafambisirwo epasi.
Wongorora hukuru hwekugadzira matanho
Chishanu 14 Ndira 2022
Zvipfeko MuVietnam, isu tinoona iyo bamboo lattice maitiro mune akawanda zvigadzirwa zvakadai sebhoti, fenicha, huku yemarara, marambi ... Bamboo lattice yakasimba, haina mari, uye iri nyore kugadzira. Chiono changu ndechekugadzira dhizaini yekupfeka iyo inonakidza uye ine nyasha, yakakwenenzverwa uye inoyevedza. Ini ndakaisa iyi bamboo lattice dhata kune mamwe mafashoni angu nekushandura iyo yakasviba, yakaoma yenguva yekutanga kuti inyore. Zvangu zvigadzirwa zvinosanganisa tsika neyechimanje mafomu, kuomarara kweteteni muenzaniso uye nejecha kupfava kwemicheka yakajeka. Yangu yekutarisa iri pane fomu uye zvinyorwa, zvinounza runhu uye huchikadzi kune iye anopfeka.
The Great Goddess Isida
China 13 Ndira 2022
Mhete Yedhaimani Isida mhete yegoridhe ye14K iyo inotsvedza pamunwe wako kugadzira kutarisa kwakanaka. Iyo facade yeIsida mhete yakashongedzwa nezvinhu zvakasarudzika samadhaimani, amethysts, macitrines, tsavorite, topazi uye inosangana nechena uye yero yegoridhe. Chidimbu chimwe nechimwe chine chinyorwa chazvo, chichiita imwe-ye-mhando. Pamusoro pezvo, girazi rakapfava-senge facade pane rakacheneswa matombo anoratidza mwaranzi wakasiyana wechiedza mune dzakasiyana ambiances, ichiwedzera hunhu hwakasarudzika kumhete.
Scar is No More a Scar
Chitatu 12 Ndira 2022
Mutsipa Dhizaini yacho ine inorwadza inorwadza nyaya kumashure kwayo. Rakafemerwa neshungu yangu isingakanganwiki yekunyadzisa pamusoro pemuviri wangu iyo yakapiswa nemidziyo yakasimba yemoto pandaive nemakore gumi nemaviri. Pakuedza kuifukidza ne tattoo, iyo tattoo akandiyambira kuti zvingave zvakaipisisa kuvhara kuvhunduka. Wese munhu ane vanga rake, munhu wese ane yake isingakanganwiki inorwadza nyaya kana nhoroondo, yakanyanya mhinduro yekurapa ndeyekudzidza maitiro ekutarisana nayo uye kuikunda zvine simba pane kuvhara kana kuedza kuyesera kubva pairi. Naizvozvo, ndinotarisira kuti vanhu vanopfeka zvishongo zvangu vanogona kunzwa vakasimba uye vaine hutano.
Chipiri 11 Ndira 2022
Chakabatana Wachi COOKOO ™, yekutanga kugadzirwa smartwatch iyo inosanganisa analog kufamba pamwe nedhijitari kuratidza. Iine iconic dhizaini yayo yekupedzisira yakachena mitsara uye yakangwara inoshanda, wachi inoratidzira inosarudzwa zviziviso kubva kune yako smartphone kana iPad. Kutenda kune COOKOO App ™ vashandisi vanogara vari mukutonga kwehupenyu hwayo hwakabatana nekusarudza kuti ndedzipi zviziviso uye zvekuzivisa zvavanoda kugashira kurudyi kwechiuno chavo. Kudzvanya customizable COMMAND bhatani kuchabvumira kure kuresa kamera, kure inodzora mimhanzi kutamba, imwe-bhatani Facebook-kutarisa-uye mamwe akawanda sarudzo.
Muvhuro 10 Ndira 2022
Laptop Kesi Yecomputer kesi neakakosha tambo uye Specialfasten imwe kesi kesi. Zvemidziyo ini ndakatora ganda zvakare. Kune mavara akati wandei kubva kuti munhu wese anogona kutora ake. Chinangwa changu chaive chekuita pachena, inonakidza laptop yemacomputer iyo iri nyore kudzingisa system yekuchengeta uye kwaunogona kumhanyisa imwe kesi kana iwe uchifanira kutakura kuti upamhidze Mac bhuku pro uye Ipad kana mini Ipad newe. Iwe unogona kutakura amburera kana pepanhau pasi pemhosva pamwe newe. Kesi nyore kuchinjika nyaya yemazuva ese inodiwa.
Svondo 9 Ndira 2022
Raincoat Iyi mvura yemvura inosanganisa nejasi rinonaya mvura, amburera uye mvura isina mvura trousers. Zvichienderana nemamiriro ekunze uye huwandu hwemvura inogona kuchinjirwa kumazinga akasiyana ekudzivirira. Chinhu chake chakasiyana ndechekuti inosanganisa raincoat uye amburera mune chimwe chinhu. Ne "amburera raincoat" maoko ako akasununguka. Zvakare, inogona kuve yakanakira zviitiko zvemitambo sekukwira bhasikoro. Mukuwedzera mune mugwagwa une vanhu vakawanda iwe haugunun'una mune imwe amburera sezvo amburera-hood inotambanudzira pamusoro pemafudzi ako.
Tinoda zvekutanga uye zvekugadzira zvigadzirwa, hunyanzvi, kuvaka, mafashoni, dhizaini dhizaini, kugona nekugadzira chirongwa. Mazuva ese, tinosarudza uye tinoburitsa magadzirirwo akanaka nevashandisi vane tarenda, vekugadzira mhizha, vanogadzira zvigadzirwa uye makuru mabhuki. Chinangwa chedu ndechekugadzira kuonga kwepasirese uye kuziva kune dhizaini yakanaka.
Simplest Happiness Kutengeserana Mimhanzi China 20 Ndira
Chirming Poster Chitatu 19 Ndira
Santander World Zvidhori Zvemadhorobha Chipiri 18 Ndira
Ndira 2022 (93)
Zvita 2021 (93)
Mbudzi 2021 (90)
Gumiguru 2021 (93)
Dhizaina bvunzurudzo yezuva China 20 Ndira
Dhizaina ngano yezuva Chitatu 19 Ndira
Dhizaini yezuva Chipiri 18 Ndira
Mugadziri wezuva Muvhuro 17 Ndira
Dhizaini timu yezuva Svondo 16 Ndira
Zvipfeko Mhete Yedhaimani Mutsipa Chakabatana Wachi Laptop Kesi Raincoat
2022 Dhizaini magazini.